izenzakalo agesi ngempela zenzeke ngaphakathi kohlaka ukwakhiwa kanye nokuvuselelwa kwazo. Ngaphezu kwalokho, izindlela zabo asetshenziswa abanye izimboni futhi ukuhlolwa materials. ingxenye okuphoqelekile okwenziwa ezikhungweni arsenal of yimuphi Electricians amadivayisi kagesi ezikuvumela ukuchaza izici umugqa ethile yomsebenzi.
ulwazi olujwayelekile mayelana ubunjiniyela kagesi
amadivaysi Iningi lesi sigaba igxile ukuhlonza nemingcele ezintathu eziyinhloko - zamanje, voltage ukumelana. Kulokhu, zikhona amadivaysi ezikuvumela ukucacisa izici ezintathu nje, kodwa kukhona insimbi ezikhethekile yakhelwe ukuhlonza izinkomba ezithile. Kodwa wonke amadivayisi zihlukile isimo esisodwa esibalulekile umsebenzi - abazi ungasaphuli futhi akuthuntubezi emgqeni ekhona. Ikakhulu, i- pincers wokulinganisa uyakwazi ukulungisa ibutho amagugu imisinga ezinkulu ngaphandle kokuphula wesifunda. Nokho, lapho babe onobuhle compact lolu hlobo nemiphumela ethile engathandeki abalulekile. Okokuqala, ngokuvamile hhayi olunembile kakhulu. Engingakusho nje ukuthi isinqumo izinga ipharamitha incike yokuma izingxenye zemoto zedivayisi. Okwesibili, ukuze idatha ucishe umgomo idinga ezinye ukuqeqeshwa umsebenzisi.
Kwezinye izimo, wasebenzisa yokulinganisa nezizenze?
Thina imikhaza ensimini likubeka ngokucacile kwesicelo. Iqiniso ukuthi professional imishini ukuhlola ngempela efanelekayo esendlini futhi esakhiweni, lapho kukhona zonke izimo umsebenzi ukhululekile. Futhi, izibungu begxile kakhulu emsebenzini ezindaweni okunzima, kuhlanganise emigceni ephezulu voltage. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi umsebenzi zifakwe ezindaweni ezizwelayo kungase kungabi nje ithuluzi yalolu hlobo. Kodwa ngqo nokugcina impahla ezanele ukusebenza, isibonelo, ekukaleni DC izibungu kulekelelwa imishini elisizayo. Ngakho, uma nesilinganiso senziwe okufanayo okusezingeni eliphezulu-voltage line, ngeke kube khona umonakalo ngaphezu zisebenzisa multimeter imisebenzi. Kukhethwa ikakhulu onobuhle digital - bayoba ukusebenza kahle namakhizane isimo sikuvumela ukucutshungulwa okwalandela kanye nokubhaliswa.
Izinhlobo imikhaza yokulinganisa
Kunezinhlobo ezintathu lomgomo ngu yokulinganisa olwenziwa zilwane. ngezigaba Basic inikeza amathuluzi izingxenye ngokuvumelana uhlobo ukubaluleka kulinganiswa. Ikakhulukazi, amadivaysi kagesi kungenziwa emelelwa wattmeters, ohmmeter futhi phasemeter t. D. Yiqiniso, kukhona onobuhle enemisebenzi eyenzelwe yokusingatha eziguquguqukayo eziningana ngesikhathi esisodwa, kodwa ukunemba izilinganiso ezifana ngokuvamile kunabayeni insimbi ezikhethekile.
Eyesibili iphathelene ukwehlukana ukubulawa constructional. Kulesi sisekelo imodeli zihlukaniswe sikebhe digital futhi okungaphakejiweunpackaged. Okunye futhi okubaluleke ngokufanayo indlela yokudlulisa idatha - lena lwesithathu ngezigaba indlela. Ngokwesibonelo, namadivayisi amaningi okuqanjwe yezokusakaza idatha nge iziteshi analog. Kodwa kukhona okwandisa kanye omakhalekhukhwini. Lezi zihlanganisa Fluke imitha ngocingo e ukuguqulwa CNX 3000. Lo mshini kungenziwa exhunywe kwi-multimeter naku laptop yakho, usebenzisa adapters ekhethekile.
Amapharamitha main ukuthi ukucacisa ukusebenza apharathasi sokulinganisa, esekelwe seqiwe kunqunywa amagugu. Ngokwesibonelo, lo voltage esiphezulu ngesikhathi onobuhle ejwayelekile uqobo 600 V Ukuze ukumelana inketho efanayo kuyodingeka ibanga 20-40 ohms. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba acabangele isici yokungaqiniseki. Ngokuvamile amadivayisi zochwepheshe lesi sigaba zinenani ubuncane ngeziphambeko - komyalelo wokungabi 1%. Household yokulinganisa nezizenze enze izilinganiso ngephutha isilinganiso mayelana 2%. Futhi, lapho kukhethwa abathola idivayisi kagesi kuyadingeka ukuba banake ezinye, imingcele ergonomic. Uma kuziwa apharathasi digital ke, isibonelo, ngeke engadingekile ukuhlola ukusebenza amakhono esibonakalayo, ekubonisweni nesinqumo, nokuxhumana.
onobuhle Functional nezobuchwepheshe imikhaza kukhona emakethe Elitech brand okukhulunywe inkampani Fluke, Sturm nabanye. Lawa imishini yesimanje ezikuvumela ukwakha isixha aminyene zokuxhumana ngama-computer futhi multimeters. I Onjiniyela ucabangisise kahle ngezinselele kanye nomklamo ukusebenza onobuhle ngokuya ukunciphisa ukuphazamiseka, futhi banakekele Ergonomics jikelele zedivayisi. onobuhle bendabuko Okuningi ezivezwa izinkampani zasekhaya, phakathi lapho "Bison" futhi "Resanta". Njengoba ungalindela, le izibungu Dietze nomklamo classical base yokusebenza ukumelana nesilinganiso, zamanje nezesikhathi voltage. Lokhu akusho ukuthi imishini Russian ngokuyisisekelo ulahlekelwe imikhiqizo angaphandle processability. Ibhajethi okufushane ngempela nje sibheke isizinda imishini premium Elitech noma Fluke, kodwa eminye imikhaya brand efanayo "Zubr" amasu akhona izixazululo zanamuhla ukuqaliswa ukusebenza kanye kwesakhiwo kwezindlu.
Nalapha futhi, umehluko ngesisekelo intengo ikakhulukazi Yarkov kuyofikwa lapho eqhathanisa ukukhiqizwa Russian angaphandle. In the line izinkampani isabelomali wokwenza yasekhaya ungathola isibonelo sokuba ayizinkulungwane 1-2. Hlikihla. imishini kangcono, angasetshenziswa ekuxazululeni izinkinga professional, kulinganiselwa ngaso ayizinkulungwane 3-4. Hlikihla. By endleleni, in the uhla efanayo eziphansi wokulinganisa angaphandle nezizenze. Intengo imishini yobuchwepheshe kusukela Fluke noma Sturm ongafinyelela ayizinkulungwane 6-7. Leli yizinga ubuchwepheshe obufanayo engenantambo, esibonakala by ukunemba okuphezulu nokulinganisa, futhi ihlala isikhathi eside.
Ngo ukukhetha yokulinganisa imishini kubalulekile ukuhlola izimfuneko ukusebenza okuhleliwe. ezahlukene kakhulu yokusebenza nezakhiwo mathuluzi, ngakho nemingcele Ukukhetha ziyahlukahluka kakhulu. Ngakho-ke, umsebenzi wonyaka emgqeni ekhaya iyisevisi yangasese, ithuluzi ukumeda design ejwayelekile, i-analog nokuhlinzekwa idatha kanye izindleko up 2 ayizinkulungwane. Ngoba inkosi evame ebhekene umsebenzi odingekayo isinqumo imisebenzi wokulinganisa lolu hlobo, kubalulekile ukuhlinzekela umshini lubucayi kakhudlwana . Lokhu kungaba imodeli ne ithegi intengo mayelana 4 th., Yikuphi ukuvumela umsebenzisi ukuba isikhombi ne imishini elisizayo. i samuntu okunjalo kuyinto kwemisebenzi yoMnyango ngokuya nesilinganiso ukunemba, futhi ukusebenza Ergonomics ngokuphathelene zisebenzisa imikhiqizo.
Yini ukubhala eNdiya yasendulo futhi ngalokho amathuluzi